Savita Bhabhi: India Inonyanya Kuzivikanwa uye Inokakavara Comic | Absolut Kufamba
Ini ndoda kuverenga ma comics uye iri mhando yehunyanzvi iyo isina kana miganhu. Comics inogona kufanana neUnited States, Europe kana Japan, asi chokwadi ndechekuti, semuenzaniso, kune mamwe ma comics muIndia uye imwe yeanonyanya kufarirwa ma comics Savita Bhabhi.
Ndozvinonzi India inonyanya kufarirwa uye inokakavara comic uye nhasi, paAbsolut Viajes, isu tinoda kusangana naye. Anomu comic wemuIndia? Chaizvoizvo? Ehe, saka ndiyo nguva yekusiya manga uye mamwe maasia eAsia neWestern kwechinguva kuti uzive komiki Yakagadzirwa muIndia.
1 Comics muIndia
2 Savita Bhabhi, iyo porn inosetsa
3 Iyo Adventures yeSavita Bhabhi
Ngatiendei muzvikamu, akadaro Jack the Ripper. Saka, ngatitangei nekuziva nyika yemakomiki zvishoma munyika ino hombe uye yakakura. Indian ma comics anoenda nezita rekuti chitrakatha. izwi iri rinosanganisira mabhuku enyambo uye mifananidzo yemifananidzo inomiririra tsika yenyika, nekudaro anoburitswa mumitauro yakati wandei inotaurwa pano.
Ngatirangarirei kuti India ine chitendero chakapfuma uye ngano, saka nyika ine tsika refu yevaverengi yemabhuku, graphic novels uye ma comics kubva paudiki hwehudiki. Zvakadaro, indasitiri yenyaya inotanga muma60s, asi chete yemhuri nevana veruzhinji. Bazi revakuru rejenasi rakazoshanduka pano, asi rakazobudirira.
Pakati pehupfumi, Indian comic yaive yakabudirira zvakanyanya mukupera kwema80 uye kutanga kwemakumi gumi anotevera, makore umo vaprinta vasina kupa yakakura. Ehezve, yakafanana yekudhinda uye yekutengesa manhamba akadonha kubva ipapo, sekune pasirese, uye maererano nechikamu chevana haina kukwanisa kukwikwidza neterevhizheni chiteshi kana yevhidhiyo mutambo indasitiri.
Chero zvazvingaitika, gore rega rega pane zvimwe zviitiko zvinoisa nyika yenyika yeva comics, senge iyo Nhoroondo ye Indian Comic Con, iyo Comics Fest India, iyo Indie Comix Fest kana iyo New Delhi World Book Fair. Uye ichokwadi zvakare kuti vazhinji maIndia ma comic vagadziri vatanga kutamira kuWest vachishandira zvishoma kuRima House, DC, Archies kana Mufananidzo.
Savita Bhabhi, iyo porn inosetsa
Kuziva zvishoma nezvenyika yevaIndia enyambo, ngatitangei izvozvi inozivikanwa uye ine nharo comic. Nei zvichikakavadzana? Ndezvekuti iri zvinonyadzisira zvinonyadzisira uye bonde muIndia inyaya inonetsa.
Savita izita re mukadzi anotungamira, UN mukadzi wepamba nehunhu husina kutsarukana zvinoenderana netsika dzechiIndia. Rimwe izwi, bhabhi, zvinoreva mukwasha uye izwi rinoremekedzwa rinoshandiswa kuchamhembe kwenyika kureva madzimai edzimba.
Iyo comic akaonekwa kekutanga mu2008, munaKurume, uye zvakabva zvangoita nharo nekuti nzanga yeIndia inochengetedza zvakanyanya. Vazhinji vakati comic yaimiririra yakasununguka bapiro yenzanga, asi isu tatoziva kuti iro bapiro idiki.
Asi zvinonyadzisira hazvisi pamutemo muIndia here? Ehe, kugadzirwa kwezvinonyadzisira hazvisi pamutemo, saka kubva pakutanga iyo webhusaiti iyo comic yakaburitswa yakaongororwa nehurumende kugadzirisa mutemo wazvino. Asi ipapo pakanga paine zvirevo zverusununguko uyezve vatapi venhau vazhinji vakabatana mukushoropodza chiero chehurumende, vachichiidza chisiri chepamusoro uye chemhuri. Nekudaro, mvura dzakamutswa zvakakwana zvekuti comic haina kuparadzwa.
Pakutanga iyo vagadziri ve comic uye saiti umo maakabudiswa maichengetwa mu kusazivikanwa, pasi pezita rezvese Porn Empire, asi gore rakatevera, muna 2009, Puneet Agarwak, iye musiki wesaiti uye chizvarwa chechipiri maIndia anogara kuUK, akazivisa kuzivikanwa kwake kuti arambe achirwisa kurambidzwa. Asi mhuri iyi yanga isina nguva yakanaka uye masvondo mashoma akazivisa iyo enda kune komiki.
Izvo hazvina kugara kwenguva refu asi zvaive kubudirira, uye ipapo kumwe kuchinjika mune mimwe mitauro kwakatanga kuoneka. Kureva, muna 2011 paiva komedhi, muna 2013 bhaisikopo uye muna 2020 a tamba, ese akafuridzirwa neanopenga hunhu hwemukadzi wemba weIndia.
Iyo Adventures yeSavita Bhabhi
Iyo fomula yakapusa uye seyakagara ichibudirira kana zvasvika pakusimudza tembiricha yevarume: Savita mukadzi wechidiki uye akanaka, anozvipira uye akaroora. Kuziva zvishoma nezvetsika dzechiIndia, tinoziva kuti akaroora nekuti vhudzi rake rakapendwa zvishoma zvakatsvuka, uye zvakare akapfeka mhete yegoridhe iyo yakaenzana neindi yemuchato.
Savita zvakare anowanzo pfeka yechinyakare sari uye tsvuku pfundo pakati peye tsiye, iyo bindi. Murume haasi pamba, saka kutiza kusurukirwa, kufinhwa uye kusagutsikana pabonde Savita ane hushamwari nemunhu wese anopfuura. Uye nehukama tinoti iye anorara navo vese. Hapana chinhu chinorambidzwa kana kutadza kana kurambidzwa. Kune mamwe makunakuna angatizarurire kuWest ...
Iyo comic ndeyechokwadi saga yekurambidzwa kusangana pabonde uye nekuda kwechikonzero ichocho kwaive kurova kune conservatism yenzanga yeIndia. Pamusoro pezvo, chokwadi chekuti komiki yashandurirwa mumitauro mipfumbamwe inonyanya kufarirwa muIndia chakabatsira mukubudirira kwayo. Kubudirira kwakaratidzirwa mu 30 zviuru vanyoreri iyo yaanoziva kuva nayo panguva yayo yemazuva.
Kubudirira kwaSavita Bhabhi futi kwakakonzera makakatanwa ane hupenyu pakati pevesainzi. Mushure mezvose zvinonzi kunyange nanhasi 70% yevaIndia vachiri vechinyakare. Asi, kutonga kubva kumushamarari, iyo tsika haiite monaki uye kuti iwe unopfeka saree uye kutaridzika setsika hazvireve kuti iwe haugone kutungamira inoshanda uye kunyange yakati sununguka hupenyu hwepabonde nemaitiro ako etsika.
Uye ndizvo zvinoratidzwa naSavita Bhabhi chaizvo, zvinoitika mumba uye kwete pour la gallery. Isu tese tinoziva kuti zvinhu zvinoitika mukati meimba, asi hapana munhu anotaura nezvazvo ... kana zvirinani pakanga pasina hurukuro yakawanda muIndia kusvika kusvika kwenyaya iyi.
Asi zvinhu zvachinja muIndia? Kwete, zvinoita sekunge maIndia haasati akagadzirira shanduko yebonde. Chero zvazvingaitika, nhaurwa yakamutswa inogara iri yakanaka uye inobvumira chizvarwa chechidiki kuti vakurukure nezve kwavo hupenyu hwepabonde zvakanyanya pasina taboos.
tsika nemagariroZvematongerwo enyikaSociedad
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Savita Bhabhi: India Inonyanya Kuzivikanwa uye Inokakavara Comic